update – Gaming Noodle
Female Hero အသစ်ကို 7.28 Patch နဲ့အတူထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့ Dota2 Dota2 နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အချိန်အတော်အကြာရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့တဲ့ Valve ကတော့ ဒီနေ့မှာပဲ Dota Plus Update, 7.28 Patch နဲ့ DPC Season အသစ်ကျင်းပမယ့်ရက်တွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကြေညာတဲ့အထဲမှာ နိုဝင်ဘာလကုန် မှာထုတ်ပေးဖို့လျာထားခဲ့တဲ့ Hero အသစ် အကြောင်းလည်း ပါဝင် ခဲ့တာကြောင့် Dota2 ကစားသမားတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ။ ပထမဦးဆုံးကြေညာခဲ့တဲ့ Dota Plus Update ကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Quest အသစ်တွေအပြင် Seasonal Treasure အသစ်ပါ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ္စမတ်စ်ရာသီဖြစ်တာကြောင့် အသစ်ထွက်လာမယ့် Treasure အသစ်ဟာ …
Female Hero အသစ်ကို 7.28 Patch နဲ့အတူထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့ Dota2 Read More »
Dota New Patch 7.22 Coming Soon???
The Internaitional 2019 (TI9) ျပဳိင္ပြဲၾကီးနီးကပ္လာသလုိ 2018-2019 Dota Pro Circuit ျပီးဆုံးဖုိ႔အတြက္လည္း StarLadder Ukarine Minor ႏွင့္ EPICENTER Major ႏွစ္ခုသာ က်န္ရွိပါေတာ့တယ္။ လက္တေလာ ျပီးစီးခဲ့တဲ့ MDL Disneyland Major မွာ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ Version ကေတာ့ v7.21d ျဖစ္ျပီး ၄င္း Version ဟာ မတ္ခ်္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကတည္းက ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ Version တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔အထိ တြက္ၾကည့္ရင္ ဒီ Version ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ၅၄ ရက္ တိတိ ရွိျပီျဖစ္ပါတယ္။ MDL Major ဟာ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ …
Dota New Patch 7.22 Coming Soon??? Read More »